“ईश्‍वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो?” के ईश्‍वरले मेरो ख्याल राख्नुहुन्छ?
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय काबुभरदियानु काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चाङगाना (मोजाम्बिक) चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जाभानिज जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पलाअन पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुवा मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन रोमानी (भ्लाक्स, रुस) रोमानी (सर्बिया) लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लोम्वे वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
“म अक्सर यो प्रश्‍न सोधिरहन्छु: ईश्‍वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो?”—पोप बेनेडिक्ट सोह्रौँ, पोल्याण्डको अस्वीचस्थित पहिलेको यातना शिविरमा भ्रमण गर्दा।
दुःखद घटना घट्‌दा के तपाईँको मनमा यस्तो प्रश्‍न आउँछ, ‘ईश्‍वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो?’ अथवा तपाईँको जीवनमा एकपछि अर्को पीडादायी घटना घट्‌दा ईश्‍वरले मेरो ख्यालै राख्नुहुन्‍न जस्तो लागेको थियो कि?
तपाईँले पनि अमेरिकामा बस्ने शीलाले जस्तै महसुस गर्नुभएको छ होला। धर्ममा आस्था राख्ने परिवारमा हुर्किएकी शीला यसो भन्छिन्‌: “सानैदेखि ईश्‍वरमा विश्‍वास गर्थेँ किनभने उहाँ नै हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तर उहाँसित घनिष्ठ भएको कहिल्यै महसुस गरिनँ। उहाँले मलाई टाढाबाट मात्र हेरिरहनुभएको छ जस्तो लाग्थ्यो। ईश्‍वरले मलाई घृणा गर्नुहुन्छ जस्तो त लाग्दैनथ्यो तर उहाँले मलाई माया गर्नुहुन्छ जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो।” शीलालाई किन त्यस्तो लाग्यो? तिनी भन्छिन्‌: “मेरो परिवारले दुःखमाथि दुःख भोग्नुपऱ्‍यो तैपनि ईश्‍वरले रतीभर मदत गर्नुभएन।”
सर्वशक्‍तिमान्‌ ईश्‍वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ पनि शीलाजस्तै पक्का हुनुहुन्छ होला। तर उहाँले तपाईँको साँच्चै ख्याल राख्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्‍न भन्‍ने कुरामा चाहिँ शङ्‌का गर्नुहुन्छ होला। सृष्टिकर्तासित शक्‍ति र बुद्धि छ भनेर विश्‍वास गर्ने अय्युबलाई पनि त्यस्तै शङ्‌का लागेको थियो। (अय्युब २:३; ९:४) अय्यूबको जीवनमा एकपछि अर्को पीडादायी घटना घट्यो। त्यसबाट उम्कने कुनै बाटो नदेखेर तिनले ईश्‍वरलाई यस्तो प्रश्‍न सोधे: “तपाईँ किन आफ्नो अनुहार अन्तै फर्काउनुहुन्छ र मलाई आफ्नो शत्रु ठान्‍नुहुन्छ?”—अय्युब १३:२४.
बाइबल के भन्छ? के ईश्‍वरले गर्दा हामीले दुःखकष्ट भोग्नुपरेको हो? ईश्‍वर मानिसको ख्याल राख्नुहुन्छ र हरेकलाई चासो देखाउनुहुन्छ भनेर के प्रमाण छ? परमेश्‍वर हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ, हामीलाई राम्ररी चिन्‍नुहुन्छ, समानुभूति देखाउनुहुन्छ र समस्या आउँदा मदत गर्नुहुन्छ भनेर के हामी आफैले महसुस गर्न सक्छौँ?
परमेश्‍वर हाम्रो चासो राख्नुहुन्छ भनेर सृष्टिले कसरी देखाउँछ, त्यसबारे यसपछिका लेखहरूमा छलफल गर्नेछौँ। (रोमी १:२०) अनि बाइबलले यसबारे के भन्छ, विचार गर्नेछौँ। ईश्‍वरको सृष्टि र उहाँको वचनबाट हामी ‘उहाँलाई चिन्दै’ गएपछि उहाँ हाम्रो “ख्याल राख्नुहुन्छ” भन्‍ने कुरामा ढुक्क हुन सक्छौँ।—१ युहन्‍ना २:३; १ पत्रुस ५:७.
ईश्‍वर तपाईँको भलो चाहनुहुन्छ भन्‍ने कुराको कस्ता प्रमाणहरू छन्‌?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने “ईश्‍वर कहाँ हुनुहुन्थ्यो?”